१३ वर्षीय दलित बालिकालाई लामो समयदेखि बलात्कार गरेको आरोपमा तीन जना पक्राउ - Bageshwori News
१३ वर्षीय दलित बालिकालाई लामो समयदेखि बलात्कार गरेको आरोपमा तीन जना पक्राउ
३ जेष्ठ २०७७, शनिबार १५:१०
in देश, पत्रपत्रिका, प्रवास, प्रहरी-प्रशासन, समाचार, समाज, स्थानीय सरकार
धनकुटा– ६ आत्मारा बस्ने १३ वर्षीय दलित बालिकालाई लामो समयदेखि बलात्कार गरेको आरोपमा तीन जना पक्राउ परेका छ्न ।
जेष्ठ ३ गते पीडित बालिकाको पिताले प्रहरीमा उजुरी दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यलय, धनकुटाका प्रहरी नायब उप निरीक्षकले जानकारी दिनु भएको छ। लामो समय देखि १३ वर्षीय बालिकालाई धनकुटा नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित गोकुण्डेश्वर मा. वि. का शिक्षक मदन अधिकारी, सोही वडाकै गौरी अत्री, सिरान बजारका देवेन्द्र श्रेष्ठ र कचिडेका भक्तबहादुर मगरले जबर्जस्ति यौन शोषण गरेको जानकारी पाउन साथ हामीले जि.प्र.का , धनकुटाका प्रहरी नायब उपनिरीक्षक सङ्ग सम्पर्क गरेउ ।
‘यौन शोषण भएको हो र जेष्ठ १ गते उजुरी पनि परेको हो । यस अपराधिक क्रियाकलापमा को कस्को हात छ भन्ने बारे अनुसन्धान जारी छ। उजुरीमा भने बमोजिम हामीले ३ जनालाई गिरफ्तार गरिसकेका छौ १ जना को भने खोजि भैरहेको छ’ प्रहरी नायब उपनिरीक्षकले बताउनु भयो ।
हामीले पाएको जानकारी अनुसार पिडित बालिका गर्भवती छिन र अपराधीहरुले मेल मिलाप गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । यहि प्रशनको जवाफ दिदै धनकुटा जिल्लाका सुचना तथा सम्पर्क अधिकृतले ,’ प्रहरीमा उजुरी आउनु अगि के के भयो यो सङ्ग केही सरोकार भएन । तर अब मेलमिलाप गर्ने वा दलित बालिका हो भन्ने जस्ता कुरा नै आउदैन ।
१३ वर्षीय बालिकाको मर्जीले नै यौन शोषण गरेको भए पनि यो केसमा कानुन बमोजिम नै कार्वाही हुन्छ। कोहि कसैको दबाब वा दलित हो भन्न मिल्दैन अपराधीहरुलाई कानुन बमोजिम नै कार्वाही हुनेछ । उजुरीको अनुसार लामो समय देखि नै नाबालिकलाई जबर्जस्ति यौन शोषण गरिएको थियो । उनलाइ सुरक्षा साथ अहिले मेडिकल टेस्टका लागि धनकुटा जिल्ला अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । गर्भवती भएको हो कि होइन भन्ने बारे अहिले हामी केही भन्न सक्दैनौ । अनुसन्धान जारी छ । आरोपित मध्य १ जनाको खोजी हुँदै छ बाकी ३ पक्राउ परिसकेका छ्न ” बताउनु भयो ।
साभार :- www.bindasonline.co बाट
सिमापारि क्वारेन्टिनमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन सुरु
निकिता रानी महल अनि भएन त अचम्म ?? ( भिडियो सहित )